Ajụjụ banyere igbochi nwa mgbochi mgbe afọ iri anọ dị oke ka ọ dị obere, n'ihi na nwoke na nwanyị anaghị abịa ngwa ngwa, kama nke nta nke nta, nsọ nwanyị, ọbụna na nkwụsịtụ, ma na-aga, nke pụtara na nwanyị nwere ike ịtụrụ ime. Nkọwa maka ụmụ nwanyị mgbe afọ iri anọ gasịrị na-enwe mmetụta dị iche iche, maakwa, ụmụ nwanyị nke Balzac nwere ike iji ndị nke a na-emegiderịta onwe ha na ụmụ nwanyị ndị ahụ na-emebighị.
Ọgwụ mgbochi akwara mgbe afọ 40 gasịrị
A na-enye ha mbadamba nkume, nke a ghaghị ịṅụ mmanya maka ụbọchị 21, na mgbe ezumike maka ụbọchị 7. Ọ bụghị nanị na ha na-egbochi ime ime, ma belata ihe ize ndụ nke ịmalite ịrịa ọrịa cancer na ọrịa ụmụ nwanyị, na-eme ka oge nkwụsị, mee ka usoro PMS ma belata ihe mgbu. A na - eji ọgwụ ndị na - egbochi ụmụaka na - egbochi ọgwụ mgbochi gestagenic na mini-africa maka afọ iri anọ.
N'ime ndị a, ndị kachasị ewu ewu bụ:
Ha nile nwere obere ntinye nke estrogen hormon. Ngwakọta ọgwụ mgbochi ọnụ gụnyere:
Otú ọ dị, ọgwụ ndị a na-enye ọgwụ maka hormone maka ụmụ nwanyị mgbe ha dị afọ iri 40 pụrụ nanị ịhazi dọkịta na-adabere na ngosipụta na ime mkpesa, ọrịa ndị dị ugbu a, wdg. Ọ bụrụ na nwanyị na-ese anwụrụ, na-ata ahụhụ site na oke ibu , ọrịa obi, mgbe ahụ enwere ike ịnye ya ka o jiri ụzọ ndị ọzọ nke ime mgbochi. Na mgbakwunye, enwekwara ọgwụ mgbochi hormonal nke nwere ike ịme mgbe enweghi mmekọahụ na-enweghị nchebe, dịka ọmụmaatụ, postinor, mana anaghị eji ha eme ihe.
N'oge a, nwanyị nwere ike ịtụkwasị onye ọlụlụ ya obi ma jiri condom zuru oke dịka nchebe pụọ n'afọ ime na-achọghị, na enwekwara ike nke nwanyi nwere ike itinye ya, ha nwekwara ike tinye ha n'ime ikpu ogologo oge tupu ha enwe mmekọahụ. N'oge na-adịbeghị anya, spermicides aghọwo ezigbo ewu ewu, gụnyere ụdị kandụl nile, ọfụfụ, gels na jellies, mbadamba mbadamba na ihe nkiri, sponges.
A na-atụ aro ụfọdụ n'ime ha ka ha jiri ya na diaphragm ma ọ bụ okpu ụbụrụ iji mee ka nchebe dị elu. Nke ikpeazụ a na-ezo aka na ihe mgbochi pụtara ịwa mgbochi, dị ka ngwaọrụ intrauterine. Ha na egbochi spam iji banye n'ime ovaries nke nwanyị, si otú a gbochie ime nke ime imeghi achọ. Ihe ha rụpụtara nwere ike ịbụ plastic, silicone, latex, wdg. Karịsịa, a na-etinye diaphragm ma ọ bụ okpu n'ime ikpu obere oge tupu enwe mmekọahụ, a na-etinyekwa gburugburu ya ruo ọtụtụ ọnwa, na ọbụna afọ. O doro anya na ihe ọ bụla n'ime ọgwụ ndị a nwere uru na ezughị okè nke ya, mgbe afọ iri anọ gasịrị, nwanyị kwesịrị ime nhọrọ naanị mgbe a mụsịrịchara ha, nakwa ịdabere na njirimara nke ndụ ya.
Otutu adabere ma nwayi a nwere onye obula n'agakorita ibe ya, n'ihi na oburu na odighi ya, tinye ya ma obu ihe ndi ozo n'emeghi ihe dika uche. N'okwu a, ọ ka mma iji ọgwụ nchebe dịka okpu ma ọ bụ ọnye igbu egbu. Ụfọdụ n'ime ndị ikpeazụ nwere ike inwe mmetụ ọzọ, dịka ọmụmaatụ, iji meziwanye nsị anụ ahụ, nke dị mkpa karịsịa maka ụmụ nwanyị nke Balzac, na-ezutekarị nkụ ọbụna mgbe obi dị ha ụtọ. Ugbua inwe umuaka, i nwere ike inyocha onodu nke igba ogwu ogwu, nke a bu otu n'ime umu mmadu ole na ole a na akwadoro maka umuaka ndi gafere ogo iri abuo.
Di anaghị achọ mmekọahụ
Di m achọghị ka m
Kedu otu esi eme ka mmụba nwoke ma ọ bụ nwanyị dịkwuo mma?
10 ihe kpatara inwe mmekọahụ mgbe nile
Viagra maka ụmụ nwanyị - gịnị bụ ọdịiche dị n'etiti Viagra na ndị ikom?
Kedu ka esi mee ogologo oge?
Kedu ka esi enwe mmekọahụ gbasara ike?
Gini ka ndi di di?
Kedu otu esi eji egwuri egwu nwoke?
Dioscorea caucasus - ọgwụ Njirimara
Kedu ka esi eji ihe oriri na-eri ihe?
Leukoplakia nke cervix - lee ka ọrịa si dị ize ndụ, otu esi amata ya ma mesoo ya?
Sansevieria - ọma na ihe ọjọọ
Enwere ike ịsa ahụ nwa chickenpox?
Frog na-agba ụgwọ - esi eji?
Ahịa marshmallow - na ihe ị ga-eyi uwe ọhụrụ?
Karịa ịnagide ụkwara na nwatakịrị afọ 2?
Agbapụ - Ejiji 2014
Sylvester Stallone anabataghị Oscar na-echere ya ogologo oge
Esi rie nri na Lent Lenten?
Ndụ onwe onye nke Benedict Cumberbatch
Melissa - ọgwụ Njirimara na contraindications
Nri anu ehi si anu
Ezi tọrọ ụtọ yist mgwakota agwa maka e ghere eghe
Kedu ihe bara uru maka arugula?
Gini mere ndi mmadu ji malite ndi enyi - ihe omumu mmadu nke nwoke di na nwunye
Corolla maka blender